I-iPhone SE kunye ne-9.7 "iPad Pro iyeza: Ivenkile ye-Apple ivaliwe | Iindaba ze-iPhone
IPhone SE kunye ne-9.7 ″ i-iPad Pro iyeza: Ivenkile ye-Apple ivaliwe
UPablo Aparicio | | Apple Isitolo, iPhone SE
Ukuba ubulindele isiqinisekiso esisemthethweni sokuba i-hardware entsha iyeza namhlanje, yeka ukulinda: iapile ivale iVenkile yeApple kwi-intanethi. Ithetha ntoni le nto? Ewe, baya kwenza utshintsho kwivenkile yabo kwaye, xa beyivula kwakhona, olu tshintsho luya kubandakanya izixhobo ezitsha. Zeziphi izixhobo? Ewe, ubuncinci i-iPad eya kuhambelana nepensile ye-Apple, njengoko besinokufunda kuhlaziyo lwesicelo se-AstroPad.
I-Apple ivala iVenkile ye-Apple kwi-intanethi malunga neeyure ezintlanu ngaphambi kokuyivula kwakhona ngesixhobo esitsha esikhoyo. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba bayivalile malunga nentsimbi ye-12, sinokucinga ukuba Iya kuvulwa kwakhona malunga ne-19 ngokuhlwa.
Ivenkile yeApple ilungiselela ukwamkela i-iPhone SE kunye ne-Pro entsha ye-9.7-intshi ye-iPad
Ukuba amarhe ayinyani (kwaye akukho nto isenza sicinge ukuba ayizukuba njalo), iApple izakuveza namhlanje i-4-intshi entsha ye-iPhone eza kufika negama iPhone SEImodeli eya kuba noyilo oluchanekileyo kwii-iPhone 5s, kodwa inamalungu afanayo angaphakathi njengee-iPhone 6s. Inkqubo ye- 9.7-intshi iPad Pro, I-iPad enoyilo olufanayo nemodeli abayivelisileyo ngo-Septemba ophelileyo, kodwa benento eyongezelelweyo, enjengokukhanya kweefoto kunye nekhamera ye-12MP enokurekhoda kwi-4K.
Kwelinye icala, izixhobo ezintsha kulindeleke ukuba zibukele iApple ngohlobo lwe imitya emitsha enemibala, Njengomtya waseMilanese ngombala omnyama kunye nemibala emitsha yemitya yezeMidlalo. Sele uyazi ukuba uza kuthenga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Isitolo » IPhone SE kunye ne-9.7 ″ i-iPad Pro iyeza: Ivenkile ye-Apple ivaliwe
Elona tyala linemisebenzi emininzi eligqibeleleyo kwi-iPhone yakho